Izixhobo zokukwazi ukwenza i-telework | Iindaba zeGajethi
Izixhobo zokukwazi ukwenza i-telework
Xa sisiva malunga ne-telecommunication, abantu abaninzi ngempazamo bacinga ukuba yipacea. Sebenza ekhaya Ngaba inezibonelelo zayo kunye neengxaki, Izinto eziluncedo nezingalunganga ekufuneka sizivavanyile phambi kokuba siqwalasele ukuba omnye wabasebenzi bethu, okanye thina, siwenza umsebenzi wasekhaya singakhange siye emsebenzini.
Ukuseka ishedyuli yokusebenza, ukuhlonipha ilungelo labucala kunye nokukhutshwa kwedijithali, ukumisela ukuba ngubani oza kukhathalela izinto eziyimfuneko (ikhompyuter, ifowuni ephathekayo, iprinta ...) kunye neendleko ezivela (kwi-intanethi, umbane, ukufudumeza ...) .. ezinye ze imiba ekufuneka siyithathele ingqalelo xa kuziwa ekusebenzeni ekhaya kwaye kufuneka sisekele kuqala nokuphambili.
Nje ukuba sifikelele kwisivumelwano kunye nomqeshi okanye umqeshwa wethu malunga neemeko ezifanelekileyo nezifanelekileyo zokwenza umsebenzi wethu ekhaya, ngoku lithuba lokuba sazi ukuba yintoni izixhobo esinazo ukwazi ukusebenza kude.
1 Iqela elinolwazi
2 Ii -apps zokucwangcisa umsebenzi
3 Iinkonzo zonxibelelwano
3.1 Iqela leMicrosoft
4 Izicelo zokubhala, ukwenza i-spreadsheet okanye iintetho
4.1 Ofisi ye365
5 Iifowuni zokubiza iividiyo
6 Izicelo zokudibanisa ukude
6.2 Idesktophu ekude yeChannel
Into yokuqala eyimfuneko kwaye ebaluleke kakhulu ukuze ukwazi ukusebenza ekhaya sisixhobo sekhompyuter, nokuba yikhompyuter yedesktop okanye ilaptop. Ngaphandle kokuba uyilo lwegraphic, nge izixhobo eziphakathi, uya kuba nokuninzi ngokwaneleyo ukuze ukwazi ukwenza umsebenzi wakho ukude.
Ukuchitha ixesha elininzi phambi kwekhompyuter, ukuba sikhetha ilaptop ngenxa yemicimbi yendawo, into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele yile ubungakanani bescreen: inkulu ngakumbi ngcono, ngaphandle kokuba sibeke iliso okanye umabonwakude ekhaya esinokuthi sixhume kuyo ilaptop. Ukuba awufuni kuchitha imali eninzi, kwi ikhompyutha Unokufumana iikhompyuter ezizisebenzisayo ngexabiso elihle kakhulu kunye nesiqinisekiso.
Ii -apps zokucwangcisa umsebenzi
Indlela yokuhlela umsebenzi yeyona nto iphambili ekufuneka siyithathele ingqalelo xa sisebenza ekhaya. Ngale ndlela, Trello ukuthatha ulawulo lomsebenzi wethu ukude lolunye lolona khetho lubalaseleyo okwangoku ifumaneka kwimarike. Esi sicelo sisivumela ukuba senze ibhodi apho sinokongeza kwaye sisasaze imisebenzi eyahlukeneyo ekufuneka yenziwe ngabasebenzi / liSebe lenkampani.
UAsana, usinika ngokusebenza ngokufanayo neTrello kodwa ngaphezulu ejolise kwiprojekthi, iiprojekthi ezinomhla wokuhanjiswa, zinothotho lwabaphathi kwaye zifuna uthotho lophuhliso oluzimeleyo ukuba lwenziwe. Ngokungafaniyo nezinye iinkonzo zolu hlobo, nganye yeeprojekthi inokubandakanya iifayile eziyimfuneko kuphuhliso okanye kuthethwano.
Kude kube namhla akukho mntu unokukhanyela ukuba iOfisi 365 isuti sesona sisombululo sisiso seofisi sokwenza naluphi na uhlobo loxwebhu. Kwiminyaka yakutshanje, iMicrosoft ijolise ekuphuhliseni umsebenzi kwilifu ukongeza ukudibanisa amaqonga ayo ahlukeneyo e-Ofiice ukuze lonke ulwazi oluyimfuneko kukucofa imouse.
Ukuphucula unxibelelwano ngaphakathi kwenkampani, sineqela lethu leMicrosoft, a izixhobo zonxibelelwano ezimnandi ezidityaniswa neOfisi 365. Ayisivumeli nje kuphela ukuba sibe neencoko zamaqela, kodwa ikwasivumela ukuba senze iifowuni zevidiyo, zisenza esona sisombululo sigqibeleleyo sokusebenza ekhaya.
I-Slack sisixhobo se ukuthumela imiyalezo kunye neefowuni njengoko inokuba yeyiphi na, kodwa ngokungafaniyo noku, iSlack iyasivumela ukuba senze ngokwahlukileyo amagumbi encoko, ebizwa ngamaChannel, ukujongana nezihloko ezahlukeneyo okanye iiprojekthi. Ikuvumela ukuba uthumele iifayile, wenze iminyhadala, amagumbi okuhlangana ...
Izicelo zokubhala, ukwenza i-spreadsheet okanye iintetho
Ukumkani wezicelo ze-ofisi kwaye uza kuqhubeka ukuba yi-Ofisi. IOfisi yenziwe ngezicelo ezahlukeneyo ezinje ngeLizwi, i-Excel, iPowerpoint, iNqaku elinye kunye nokuFikelela. Zonke zinjalo iyafumaneka nge-browser ngaphandle kokuFikelela, nangona sinokuzikhuphela ngqo kwikhompyuter yethu ukuba asifuni kuzisebenzisa kwi-Intanethi.
Inani lemisebenzi esibonelelwa zezi zicelo zonke ayinasipheloKwinto ethile, sele kwintengiso iminyaka engama-40. IOfisi 365 ayikhululekanga, kodwa ifuna ubhaliso lonyaka, umrhumo wonyaka womsebenzisi omnye unexabiso lama-euro angama-1 (i-euro ezingama-69 ngenyanga) kwaye ikwasinika i-7 TB yokugcina kwi-OneDrive kunye nokwenzeka kokusebenzisa usetyenziso zombini kwi-iOS nakwi-Android. Ukuba usebenzisa iMicrosoft Teams kunye ne-Skype, indibaniselwano oya kuyifumana ayifumaneki nakwezinye iiseti zemveliso.
IOfisi ka-Apple engu-365 ibizwa ngokuba yiWork, kwaye yenziwe ngamakhasi (iprosesa yamagama), amanani (amaspredishithi) kunye neKeyynote (intetho) Le software iyafumaneka ukhuphelo simahla ngeVenkile ye App yeMac. Ngokwemisebenzi, isinika inani elikhulu, kodwa hayi kwinqanaba esinokuthi silifumane kwiOfisi 365.
Ifomathi yezi zicelo, ayihambelani nokusetyenziswa okunikezelwa yiMicrosoft ngeOfisi 365, ke kufuneka siluthumele ngaphandle uxwebhu kwifomathi yeLizwi, ye-Excel kunye nePowerpoint ukuba kufuneka sabelane ngalo nabanye abantu abangazisebenzisi iWork.
Isixhobo sasimahla esenziwa nguGoogle ukuba sifumaneke kuthiwa yiGoogle Amaxwebhu, isixhobo esenziwe kwiiwebhu ezisebenzisa amaXwebhu, amaSpredishithi, iintetho, iifom. Eziapps basebenza kuphela nge-browser, azinakukhutshelwa kwikhompyuter yethu.
Inani lemisebenzi asinika yona lilinganiselwe, ngakumbi ukuba siyayithelekisa neOfisi kaMicrosoft 365, nangona kunjalo, ukwenza naluphi na uhlobo loxwebhu ngaphandle kweefrills ezininzi kunokwanela. Ewe kunjalo, kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba iifayile zenziwe kwifomathi azihambelani neOfisi 365 okanye iApple iWork.
Iifowuni zokubiza iividiyo
Ukuba inkampani yakho yamkele isisombululo seOfisi 365, esona sisombululo sisiso ukonwabela indibaniselwano esisinikwa nguMicrosoft ngazo zonke iinkqubo zayo yiSkype. I-Skype iyasivumela Iifowuni zevidiyo ezinokufikelela kubasebenzisi abangama-50, sabelana ngescreen sezixhobo zethu, thumela iifayile, urekhode iminxeba yevidiyo kunye nabanye ukuba liqonga lomyalezo.
I-Skype ayifumaneki kuphela kuyo yonke idesktop nakwisistim ecosystems, isebenza ngewebhuOko kukuthi, ngebrawuza ngaphandle kwesidingo sokufaka nayiphi na isoftware kwikhompyuter yethu.
Zoom yenye yeenkonzo esinokuzisebenzisa ukwenza iifowuni zomsebenzi wevidiyo. Simahla, isivumela ukuba siqokelele ukuya kuthi ga Abantu abangama-40 kwigumbi elinye, ubuninzi bexesha lokufowuna ngevidiyo kwimizuzu engama-40. Ukuba sisebenzisa ingxelo ehlawulelweyo, elona nani liphezulu labathathi-nxaxheba kwifowuni yevidiyo lenyuka laya kwi-1.000 XNUMX.
Izicelo zokudibanisa ukude
Ukuba inkqubo yolawulo lwenkampani yakho ayinikezeli ngesisombululo sokusebenza kude, iQelaViewer inokuba sisisombululo osifunayo, kuba ivumela ukuba sinxibelelane ngokude nezinye izixhobo kwaye unxibelelane nayo, nokuba usebenzisa isicelo, ikopi yeefayile ... I-TeamViewer iyafumaneka kuzo zombini iiWindows kunye neMacOS, iLinux, iOS, i-Android, iRaspberry Pi kunye neChannel OS.
I-Chrome, ngokwandiswa, nayo ivumela ukuba silawule kude Iqela, kodwa ngokungafaniyo neQela loJonga, asinokwabelana ngeefayile, ke ngokuxhomekeke kwiimfuno zethu, olu khetho lwasimahla luya kuba ngcono kunendlela ehlawulelweyo esiyifumana neQelaViewer.
Kakhulu TeamViewer njengaye Idesktophu ekude yeChannel Bafuna isixhobo esiqhagamshelwe kude ekuvulekeni iiyure ezingama-24 ngosuku, kodwa sesona sisombululo sikhoyo namhlanje sokusebenza kude, kwaye nenkqubo yolawulo lwenkampani yethu ayinikezeli olo khetho.
Ukuba sinethamsanqa ngokwaneleyo ukuba inkampani yethu inethuba lokusebenzisa inkqubo yolawulo kude, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuqesha iVPN ukuze Unxibelelwano phakathi kweqela lethu kunye neeseva zenkampani lubhalwe ngokufihlakeleyo maxa onke kwaye akukho mntu ungaphandle kwayo, onokuthintela unxibelelwano lwethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » Izixhobo zokukwazi ukwenza i-telework
Ukukhangela kuGoogle ngemifanekiso